Fomba fambolena maharitra Hohamafisina anaty fandaharam-pianarana
Hohamafisina anaty fandaharam-pianaran’ny mpianatra manomboka amin’ity taom-pianarana vaovao ity ny fomba fambolena maharitra na “agroécologie”.
Sekoly enina any amin’ny Faritra Vakinankaratra indray no hisitraka izany ka mpianatra miisa 1200, kilasy faha-enina sy faha-dimy eny ambaratonga faharoa no hisitraka izany. Tetikasa manitatra II no hiantsoana azy ity, izay vatsian’ny COMESA sy ny vondrona eraopeanina vola. Tompon’antoka amin’ny fanatanterahana izany ny fikambanana mivoy ny teknikam-pambolena maharitra GSDM. Nialohavan’ny Sonia fifanekem-piaraha-miasa notontosaina teny amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena Anosy izany ny Talata lasa teo, nahitana ny tale mpanatanteraky ny GSDM Rakotondramanana an-daniny, notronin’ny ministry fanabeazam-pirenena Horace Gatien an-kilany. Tsiahivina moa fa efa nisy ny fiaraha-miasan’ny roa tonta tamin’ny taom-pianarana lasa teo. Mpianatra miisa 1000, niaraka tamina ray aman-drenin’ny mpianatra sy mpampianatra tao amin’ny fari-piadidiam-pampianaran’I Vakinankaratra no nahazo tombontsoa tamin’izany ary efa saika misitraka ny tombontsoa azo avy amin’izany avokoa ny ankamaroany. Tetikasa andrana ihany moa ity tetikasa ity raha araka ny fanazavana nomen’ny GSDM raha anisan’ny tanjona hotratrarin’izy ireo kosa ny hanaparitahana izany manerana ny Nosy . Ankoatra ny fampiakarana ny taham-pambolena mantsy dia anisan’ny kolontsaina hampitaina amin’ireo mpianatra sy ny Ray aman-dReniny ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana.